မိုးကုတ်ဆရာတော် နိဗ္ဗာန် လမ်းပြမြေပုံ: မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သစ္စဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ် ကတဉာဏ် တရားတော်
အရှင်ဉာဏဓဇ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်္ဂလာမဂ္ဂင်ရိပ်သာ မိခင်ပင်မသံဝေဇနိယဌာန အမရပူရမြို့
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဝိမလ mp3 တရားတော်များ download
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သစ္စဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ် ကတဉာဏ် တရားတော်
ဒုက္ခခပ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင် သစ္စာသိအောင်လုပ်၊ သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးဆုံးဟုမှတ်၊ ဒါန၊ သီလ၊ သမထလုပ်နေတာတွေဟာ ဝေးသောအကြောင်းလို့မှတ်-ဒါန၊ သီလ၊ သမထက အခြံအရံလောက်ပဲ၊ တိုင်တစ်လုံးမှမပါဘဲ ဒိုင်းတင်တယ်ဆိုတာ ယုံနိုင်စရာမရှိ။
သစ္စာမပါဘဲ နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာ တိုင်မပါဘဲ ဒိုင်းတင်တယ်ဆိုသလိုပဲ၊ သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတယ် . . .(ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာ)၊သူများပြောတာ ယုံစရာမလို။
ဒီသစ္စာဘယ်မှာရှိသလဲ၊ သစ္စာသိမှ ကိစ္စဉာဏ်ရမယ်၊ ကိစ္စကုန်ဆုံးသိမှ ကတဉာဏ်ရမယ်၊ ဉာဏ်စဉ် ၁၀/၁၆ ဆင့်နဲ့လုပ်လိုက်ရတာ ဖားနေပြီ၊ ဘုန်းကြီးဟောတော့ သုံးဆင့်-တိုလှချည်လား သံသယဖြစ်နိုင်တယ် . . .(အဟောသိကံမဖြစ်ရပါဘူး)၊ သစ္စာရှိမှန်းမသိ- သစ္စာဆိုင်းဘုတ်မဆွဲလို့။
တစ်လံမျှသောခန္ဓာထဲမှာ သစ္စာရှိတယ်၊ သစ္စာလေးပါးရှိတယ် . . .(အင်္ဂုတ္တိလာ)၊ ဘုန်းကြီးရမ်းပြော ရမ်းသင်နေတယ် မအောက်မေ့နဲ့ . . .( ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်)၊ သစ္စာမသိတာ အဝိဇ္ဇာ၊ အတိတ်ဘဝများက သစ္စာလေးပါးမသိခဲ့လို့ (၁) ဒုက္ခသစ္စာ (၂) သမုဒယသစ္စာ (၃) နိရောဓသစ္စာ (၄) မဂ္ဂသစ္စာ မသိတာနဲ့နေခဲ့တယ်၊ ဒါန၊ သီလ၊ သမထပြုကြတယ် (၁) အပုညာဘိသင်္ခါရ (၂) ပုညာဘိသင်္ခါရ-လူနတ်ဖြစ်ပါစေဆုတောင်း။
သစ္စာသိလို့ ကုသိုလ်ပြုရင် ခန္ဓာပေါင်လှူလို့ပြောမယ် မတားပါဘူး သစ္စာမသိတဲ့ ကုသိုလ်က အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်- နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး၊ သမုဒယကိုဖြစ်စေတယ်၊ အတိတ်အကြောင်းတလွှာကိုကြည့် သမုဒယသစ္စာနဲ့လုပ်ရင် . . .(နံပါက် ၂-အကွက်ပဲ)၊ ဝိဉာဏ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ အကန်းလမ်းလျှောက်သလိုဘဲ ခြေနှစ်ချောင်းက အပုညာဘိသင်္ခါရနဲ့ ပုညာဘိသင်္ခါရ၊ ဇာတိချောက်ထဲကျမှာပဲ။
ဘုန်းကြီးစေတနာ ရည်ရွယ်ချက်က အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာကဿပတို့နဲ့တူပါတယ်၊ တရားကို(၁) နာနိုင်ပါစေ (၂) နာတဲ့အတိုင်းသိပါစေ (၃) သိတဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်ပါစေ၊ ဒီသုံးချက်နဲ့ တရားဟောနေတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူး၊ တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ ဒီရည်ရွယ်ချက်(သုံး)ချက်မရှိလို့မဖြစ်ဘူး။
ဒုက္ခသစ္စာဟာ အထီးကျန်တစ်ကောင်ကြွက်အမွဲ၊ ဒုက္ခနဲ့ နေရတဲ့သူဟာ အမွဲချည်းပဲ၊ သူတော်ကောင်းရတနာ(၇)ပါး မရှိသေးရင် အမွဲချည်းပဲ၊ အထီးကျန်လူဆင်းရဲအမွဲနှင့် တူသောကြောင့် အမွဲ၊ မဂ်မဆိုက်သေးရင် သူတော်ကောင်းရတနာမစုံသေးဘူး၊ အမေမိဘသေလည်း ကိုယ်မကယ်နိုင်၊ သားသမီးသေလည်းမိဘမကယ်နိုင်၊ ဒုက္ခရောက်နေလည်း မကယ်နိုင်၊ အထီးကျန်လူဆင်းရဲအမွဲ။
မဖောက်မပြန်မှန်တာကို သစ္စာလိုခေါ်တယ်၊ ဘာကူလို့မှမရဘူး၊ ဆာတဲ့အနာပေါက်ရင် စားဖို့ဆေး ချိုချည်ယူလာရတယ်၊ ကိုယ့်ဆေးနဲ့ကိုယ်ပဲ၊ ဆေးနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူး၊ ညောင်းရင်းကွေးပေးရတယ်၊ ဒီတိုက်ကြီးဟာ နေချင်ရချင်စရာလို့ထင်ကြတယ်၊ ဒီတိုက်ကြီးက ဆေးရုံပဲ၊ နေပူလေတိုက်ကို ကာကွယ်ထားတယ်၊ တိုက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားတွေဟာ ဆေးပဲ၊ ဝတ်တဲ့အဝတ် ခြုံထည်တွေပတ်တီးတွေပဲ။
ဘုန်းကြီးလည်း အကန်းလမ်းသွားခဲ့လို့ ခန္ဓာရ၊ ဒကာ/မများလည်းအကန်းလမ်းသွားခဲ့ရတာ . . .(အပဲ့ အပဲ့ချင်း မီးမှုတ်)၊ ဘုန်းကြီးက သုဿာန်သွားရင်းတရားဟော ဒကာ/မများလည်း သုဿာန်သွားရင်းတရားနာ၊ ဘုရားနေပူဇာလှုံနေတာ၊ အရှင်အာနန္ဒာက အရှင်ဘုရား ဒီလောက်ကြည်ညိုဖွယ်ဟာ အသားအရေတွန်ကုန်ပြီ၊ ဘုရားက ဇရာဒုက္ခ ဇာတိဒုက္ခ ဘယ်သူမှ မလွန်နိုင်ဘူး၊ ဒုက္ခသစ္စာမှ ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးပြောတယ်။
အနှိပ်စက်ခံနေရသောကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာ အနှိစက်ခံနေတဲကိစ္စ ဒီကိစ္စကို သိတာဉာဏ်။
ကိစ္စ+ ဉာဏ် ကိစ္စ ဉာဏ်
ဒုက္ခသစ္စာအနက်(၁) ဒုက္ခဿပိဠနဋ္ဌော= ဒုက္ခသစ္စာ (ဝါ) ခန္ဓာကိုယ်၏ပိဠနဋ္ဌော၊ ညှာတာမဖတ် အမြဲနှိပ်စက်တက်သောသဘော (၂) သင်္ခတဋ္ဌော=တဏှာယောင်္ကျား လက်သမား၏ ဆိုးဝါးယုတ်မာပြုပြင်ရာကို ရံခါမသွေ အမြဲခံနေရသည့်သဘော (၃) သန္တာပဋ္ဌော= အမြဲတစေ ပူလောင်စေတတ်သောသဘော(၄) ဝိပရိနာမဋ္ဌော= ခန္ဓာငါးပါး၏ အမြဲမပြတ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သည့်သဘော။
ဖောက်ပြန်တာကိစ္စ- သိတာက ဉာဏ်၊ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ အားလုံးပါသွားတယ်၊ ဒီကိစ္စကိုဖြတ်သော ဉာဏ်သည် တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံကိုဖြတ်တယ်၊ တဏှာသိမ်း နိဗ္ဗာန်ပဲ၊ ကိစ္စဉာဏ်သည် ပွားရမည့်ဉာဏ်။
အသိများရင် ကတဉာဏ်ရောက်တယ်၊ ကိစ္စဉာဏ်သည် ဝိပဿနာဉာဏ်၊ ကတဉာဏ်သည် မဂ်ဉာဏ် သင်္ဂြိုလ်မတတ်ဘဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမည်။
(အရှင်သာရိပုတ္တရာ) တရားဦးကိုလိုက်ရမယ်၊ တရားလယ်ကို မလိုက်ရဘူး၊ တရားဦးက ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငဲ့ဘူး၊ အများနဲ့ဆိုင်၊ တရားလယ်က ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငဲ့ဟောတာ၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ငွေပေးချေပြီးမှ စာရင်းမှတ်၊ အဟောကြေညက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်၊ ဒုက္ခသစ္စာ သိအောင်လုပ်၊ ပုထုဇဉ်စိတ်ကိုရှု။
စိတ္တာနုပဿနာရှု၊ လောဘစိတ်ဖြစ်/ပျက်ရှု၊ မြင်၊ ကြား၊ နံ၊ စား၊ တွေ့ထိ ယား/နာ ကောင်းစိတ် ဖြစ်/ပျက်ရှု၊ ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်/ပျက်ရှု၊ အိပ်ချင်ရင် ဖြစ်/ပျက်ရှု၊ သူများမျက်စောင်းထိုးချင် စိတ်ပေါ်ရင် ဖြစ်/ပျက်ရှု။
စိတ္တာနုပဿနာရှု-ဓမ္မာနုပဿနာရောက်သွား၊ ကိစ္စကို ပြီးအောင်လုပ်၊ ကိစ္စပေါ်တိုင်းသိ၊ သိနေရမယ်၊ အသိပေါင်းများလာရင် ကတဉာဏ်ပဲ၊ ကတဉာဏ်ဟာ နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။
ကဲ . . .တော်ကြဦးစို့။ သာဓု . . .သာဓု . . .သာဓု
တည်ရှိပါစေသတည်း ။ ။